January 2021 - SonSon LinLin
ဦးနှောက်အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ
သင့်ရဲ့ဥယျာဉ်ခြံထဲမှာ သီးပင်စားပင်တို့ စိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့အစားအစာအတွက်သာမက သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပါ အထောက်အကူပြုတဲ့ ဆေးဘက်ဝင်အပင်တို့ကို စိုက်ပျိုးထားသင့်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ အောက်ဖော်ပြပါ အပင်လေးတွေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဘက်ဝင်ပြီး ဦးနှောက်မှတ်ဉာဏ်အတွက် အကောင်းဆုံးလို့ ဖော်ပြထားကြပါတယ်။ (၁) တရုတ်နံနံပင် တရုတ်နံနံပင်ရဲ့အစွမ်းက ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးကို အကျိုးကျေးဇူးအပြုဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဇိုင်းမားရောဂါကြောင့် ဦးနှောက်ထဲ နာဗ်ကြောတွေပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး၊ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုတာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်အတွင်း နာဗ်ကြောဆဲလ်အသစ်ဖြစ်စေဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးပြီး သွေးဥနီထဲ အောက်ဆီဂျင်တွေကို ဦးနှောက်နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေဆီကို […]
အမျိုးသားတွေစွဲလမ်းတတ်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ဆီက အပြုအမူ နဲ့ အကြင်နာဝေမျှမှုတွေ…
အမျိုးသားတွေစွဲလမ်းတတ်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ဆီက အပြုအမူ နဲ့ အကြင်နာဝေမျှမှုတွေ အမျိုးသားတွေက မားစ်ဂြိုဟ်ကလာပြီး အမျိုးသမီးတွေက ဗီးနပ်စ်ဂြိုဟ်က လာတယ်လို့ဆိုပ်ါတယ်။ ကျား နဲ့ မ မှာ လိုအပ်ချက် စိတ်ဆန္ဒ နဲ့ အပြုအမူတွေက တယောက်နဲ့တယောက် ကွာခြားချက်တွေရှိတာကြောင့် စိတ်ရောကိုယ်ပါပျော်ရွှင်ရတဲ့ နှစ်ကိုယ်တူဘဝကို တည်ဆောက်ကြဖို့ဆိုရင် တယောက်သဘာဝ တယောက် သိထားကြဖို့ လိုလာပါတယ်။ အို သ်ိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီး ဆိုတာမျိုး ယောကျာင်္းတွေဘက်က ခံစားလာရဖို့ သူတို့ ကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့ […]
ခြေဖဝါးကို ဒီလိုကြက်သွန်နီ ကပ်အိပ်ကြည့်လိုက်ပါ
ခြေဖဝါးကို ဒီလိုကြက်သွန်နီ ကပ်အိပ်ကြည့်လိုက်ပါ ညအိပ်မပျော်သူတိုင်း ရောဂါဖြစ်နေသူပဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်မပျော်လျှင် ၁.ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မှည့်စားပါ။အိပ်စက်ခြင်းတွက် အထူးကောင်းမွန်းပြီး အားရှိသည်။ ၂.နွားနို့သောက်ခြင်းက အရိုးအဆစ်သန်မာသည့်အပြင် အိပ်စက်ခြင်းကို မြန်ဆန်စေပါသည်။ ၃.ကြက်သွန်ဖြူခေါင်းအုံးအောက်၃တက်ထားအိပ်ပါ။ဦးနှောက်မှ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အိပ်စက်မှုကို မြန်ဆန်စေသည်။ ၄.ကြက်သွန်နီထက်ခြက်ခွဲပီး ခြေဖဝါအလည်တည့်တည့်ကပ်ပါ။တစ်ကိုယ်လုံးမှ အဆိပ်အတောက်များကို စုပ်ယူပါလိမ့်မယ်။အအေးမိနာစေးသူ ကလေး လူကြီးမရွေး လုပ်ပေးပါက သက်သာပျောက်ကင်းစေပါမည်။ Crd Unicode ခွဖေဝါးကို ဒီလိုကွကျသှနျနီ ကပျအိပျကွညျ့လိုကျပါ ညအိပျမပြျောသူတိုငျး ရောဂါဖွဈနသေူပဲဖွဈဖွဈ အိပျမပြျောလြှငျ […]
လင်မယား ဖြစ်ရခြင်း အခြေခံအကြောင်းရင်း (၂) မျိုး ၁။ ပုဗ္ဗသန္နဝါသ – ရှေ့ဘဝ၊ ဘဝ မှ လင်မယားဖြစ်ခဲ့ရဖူးသောကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏။ ၂။ ယခုဘဝတွင် တစ်ဦး၏အကျိုးကို တစ်ဦးက စေတနာအပြည့်နှင့် သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးခြင်းကြောင့် လင်မယားဖြစ်ရ၏။ အောက်ပါအချက်များနှင့် တူညီတဲ့ အကြင်လင်မယားဖြစ်ပါကသမ္မသဒ္ဓါ – သဒ္ဒါတရားချင်းတူညီ သမသီလာ – အကျင့်ချင်းလည်းတူညီ သမစာဂါ – စွန့်ကြဲပေးကမ်းမှုချင်းလည်း တူညီ သမပညာ – အယူအဆ၊ […]
ပိုက်ဆံချေးကြသူများမှတ်သားရန် ၁- ပိုက်ဆံချေးမယ်ဆိုရင် ချေးမယ်လို့ပဲ ပြောလိုက်ပါ။ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ်ကို ဇာတ်စုံခင်းပြမနေပါနဲ့။ကြာပါတယ်။ မဟုတ်လည်း ချေးမှာပဲကို။ ဆိုတော့မရှိလို့ပဲချေးချေး၊ လက်လွန်နေလို့ပဲလှည့်လှည့်ပိုက်ဆံချေးတာဟာ ချေးတာပါပဲ။ ၂- ပိုက်ဆံတစ်ရာ နှစ်ရာမှသည် တစ်သိန်း နှစ်သိန်းအထိပိုက်ဆံဟာ ပိုက်ဆံပါပဲ။ အချေးခံရတဲ့သူက ဘာမှမရှိလို့ပြန်မတောင်းရင် ဒါမှမဟုတ် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရင်တောင် ချေးတဲ့သူက အလိုက်တသိနဲ့ သေချာပြန်ပေးရပါမယ်။ ၃- ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဘယ်သူမှ ချေးရတာရော၊ချေးပေးတာရောကို မလုပ်ချင်ကြပါဘူး။ (ငွေတိုးချေးစားသူများ မပါ)။ ဆိုတော့ ချေးလာတဲ့သူရှိလို့သာအားနာပြီး ချေးပေးကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကိစ္စမှာလုံးလုံးလျားလျားတာဝန်ရှိသူဟာ […]
သူတို့တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့ မိန်းကလေးကို ဒီလိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့
ဘယ်မိန်းမကိုမှ အလိုလိုက်ပြီး “အဲ့လောက်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး” ဆိုတဲ့ယောင်္ကျား…. သူတို့တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့မိန်းကလေးကို ခြေထောက်ကိုင်ပြီး ဖိနပ်စီးပေးဖို့ဝန်မလေးတတ်ကြဘူးဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့ !! သူ့အမေကလွဲပြီး ဘယ်မိန်းမကမှ “ဆံပင်ကိုင်တာ .. ခေါင်းကိုင်တာမျိုး”ကိုလက်မခံတဲ့ယောင်္ကျား … သူတို့တကယ်ချစ်သွားတဲ့မိန်းကလေးက ဆံပင်ဆောင့်ဆွဲတတ်တာမျိုး .. နားရွက်လိမ်ဆွဲတတ်တာမျိုးလေးကိုပဲ အပြုံးမပျက်ဘူးဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့ !! ယောင်္ကျားသဘာဝ ကပြက်ကချော်နိုင်ပြီး အချိန်ကိုလေးစားရကောင်းမှန်း မသိတတ်တဲ့ယောင်္ကျား …… သူတို့တကယ်ချစ်သွားတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ချိန်းထားတဲ့အချိန်နောက်ကျသွားရင် စိတ်ဆိုးမှာကြောက်တတ်တာကြောင့် အချိန်တိကျသွားတတ်ကြတယ်ဆိုတာ မယုံမရှိနဲ့ !! စိုးရိမ်ပူပန်တတ်တာဆိုတာ […]
နာနတ်သီးကို ကြိုက်လို့စားနေတာ နာနတ်ရွက် ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိမှန်းမသိခဲ့ဘူး
အသီးကိုသာ ကြိုက်လို့စားနေတာ အရွက်က အဲ့လောက်တန်ဖိုးရှိမှန်းမသိဘူး . နာနတ်ရွက်​ တစ်ရွက်က ဒီ​လောက်​ထိ ဆေးစွမ်းထက်မှန်း ခုမှသိ​တော့တယ်​….မိတ်​​ဆွေတို့လည်း ဖတ်​ကြည့်​လိုက်​​နော် နာနတ်ပင်ဟာဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ် ကာလမှာ နာနတ်သီးရဲ့ ဆေးစွမ်းထက်မြက်ပုံကို သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုနေကြတဲ့ သတင်းများ လည်းရှိနေပါတယ်။ တိုင်းရင်းဆေးဖက်ဝင်တဲ့ နာနတ်သီးကနာနတ်ရွက်လေးတစ်ရွက်နဲ့တင် လူအများ အတွက် ဆေးအသုံးဝင်ပုံလေးကို တင်ပြလိုပါ တယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လိုသူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်- (၁) နာနတ်ရွက်(၁)ရွက်ကို ထုထောင်းပြီးညှစ်ရည်(သတ္တုရည်) ဟင်းခပ်ဇွန်း(၁)ဇွန်းကို သကြားထည့်ပြီး သောက်ပေးပါက ကြို့ထိုးခြင်းပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ […]
တောင်းစား၍ရသမျှကို မိဘမဲ့ဂေဟာသို့ နေ့စဉ်လှူဒါန်းသည့် အသက်၁၀၁ နှစ်အရွယ် အဖိုးအို၏ စံပြုထားလောက်သော အမွန်မြတ်ဆုံးစိတ် ထား
တောင်းစား၍ရသမျှကို မိဘမဲ့ဂေဟာသို့ နေ့စဉ်လှူဒါန်းသည့် အသက်၁၀၁နှစ်အရွယ် အဖိုးအို၏ စံပြုထားလောက်သော အမွန်မြတ်ဆုံးစိတ် ထား တောင်းစား၍ရသမျှကို မိဘမဲ့ဂေဟာသို့ နေ့စဉ်လှူဒါန်းသည့် အသက်၁၀၁နှစ်အရွယ် အဖိုးအို၏ စံပြုထားလောက်သော အမွန်မြတ်ဆုံးစိတ် ထားကမ္ဘာကြီးထဲတွင် မွန်မြတ်သော စိတ်နှလုံးပိုင်ရှင်သည် များစွာရှိလှပေသည်။ ကမ္ဘာကြီးထဲတွင် ဆင်းရဲချမ်းသာ လူတန်းပေါင်းစုံနေထိုင်ကြပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရိုင်းပင်းကူညီသင့်ပေသည်။ လူသားတို့သည် အဆင့်အတန်းခှဲခွားမှုမရှိဘဲ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူညီစောက့်ရှောက်ကာ အခက်အခဲများကို ဝိုင်းဝန်ဖြေရှင်းပေးမှသာလျှင်သာယာစိုပြေသော ကမ္ဘာကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာပေမည်။ ယခုတွင် အသက်၁၀၁နှစ်အရွယ် အဖိုးအို၏ […]
အဖေ့ (သို့) အမေ့ခံလူသားဖတ်ကြည့်နော် ကောင်းကင်မှာလတစ်စင်း နေတစ်စင်းထွက်တယ်။အမေက-လတစ်စင်းဆိုရင့်အဖေက-နေတစ်စင်းပေါ့။ အမေ့မေတ္တာက အေးမြသလိုအဖေ့မေတ္တာက အလင်းရပါတယ်။အများရဲ့အမြင်မှာအဖေဟာ သားသမီးတွေ အတွက်အမေ့ခံလူသားတစ်ယောက်လိုပဲ။ အဖေ့အတွက်နေရာကျဉ်မြောင်းလွန်းလှတယ်။အမေနဲ့ အနေများတောအမေ့ကိုပဲ အချစ်ပိုတာမဆန်းပေမယ့်အဖေ့ကိုလည်း ချစ်ပါတယ် အဖေ။ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ထိကြုံရာအလုပ်ကျရာနေရာမှာ မညင်းမညူနဲ့။သားသမီးတွေ အတွက်ဆိုရင်နေပူပူကိုလည်း အံတုရဲတဲ့လူသားမိုးစိုစိုကိုလည်း မျက်ကွယ်ပြုတဲ့လူသားဆောင်းနှင်းတွေကို လျစ်လျူရှုတဲ့လူသားဆိုတာ အဖေမှ တစ်ပါးအခြားမရှိနိုင်တာအခုတော့ သေခြာသိခဲ့ရပြီ။အမေ့မေတ္တာလောက် မအေးချမ်းပေမယ့်အဖေ့မေတ္တာကလည်း နွေးထွေးပါတယ်။ သား သမီးတွေအပေါ်မှာအချစ်တွေကို ဖွင့်ဟမပြောတတ်ခဲ့ပေမယ့်သား သမီးတွေရဲ့ အရေးအရာမှာတောအဖေ့သမိုင်းကို ချန်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ မွေးဖွားတဲ့ အရွယ်လူလားမမြှောက်ခင်ကတည်းကအူဝဲ- ဆိုတဲ့ငိုသံကအဖေ့အတွက် […]
ငွေကြေးအဆင်ပြေချိန်မှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသလို ဆင်းရဲချိန်မှာရော လက်တွေမြဲမြဲတွဲထားနိုင်မလား ဘဝ တစ်ခုကို အတူတည်ဆောက်ကြတဲ့အခါ ငွေကြေး ချမ်းသာမှု ထက် စိတ်ချမ်းသာမှုက ပိုအရေးကြီးပါတယ်. . .ငွေကြေးချမ်းသာမှုနောက်ကို လိုက်ရင်း ပူလောင်နေရတာထက် မရှိအတူ ရှိအတူ လက်တွဲပြီး ဘဝ ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းရတာက ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ် ဘဝ အတွက် ငွေ ကို တတ်နိုင်သလောက်ရှာပါ. . .ငွေရှိတဲ့ အချိန်မှာ ဘဝကို ပျော်ရွှင် […]